सेन्ट्रल फाइनान्सको हकप्रद भर्ने समय थप, अब कहिले सम्म पाइन्छ भर्न ?
ARCHIVE, MARKET WATCH » सेन्ट्रल फाइनान्सको हकप्रद भर्ने समय थप, अब कहिले सम्म पाइन्छ भर्न ?
अर्थ सरोकार सम्बाददात
काठमाडौं - सेन्ट्रल फाइनान्सले ५०% हकप्रद भर्न १४ दिन म्याद थप गरेको छ । यस फाइनान्सले अब हकप्रद फागुन १३ गतेसम्म भर्न पाइन्छ । यसअघि कम्पनीले पुस २३ देखि माघ २८ गते सम्मको समयसिमा निर्धारण गरेर २ः१ अनुपातमा २६ लाख ३ हजार ३१४.०७५ कित्ता हकप्रद सेयर निष्कासन गरेको थियो । हाल सेन्ट्रल फाइनान्सको चुक्ता पुँजी ५२ करोड ६ लाख ६३ हजार रुपैयाँ छ । हकप्रदपछि भने कम्पनीको चुक्ता पुँजी ७८ करोड ९ लाख ९४ हजार २२२ रुपैयाँ पुग्नेछ ।
बिक्री प्रबन्धक एनआइबीएल क्यापिटल मार्केट्स लिमिटेड, कमलादी काठमाडौं तथा यसका शाखा कार्यालयहरु लगनखेल, ललितपुर तथा पोखरा चिप्लेढुंगाबाट आवेदन दिन सकिनेछ । त्यसैगरी, सेन्ट्रल फाइनान्सको मुख्य कार्यालय कुपण्डोल ललितपुरसहित शाखा कार्यालयहरु र नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकको विराटनगर, वीरगञ्ज, नेपालगञ्ज, इटहरी र धनगढी शाखाबाट पनि हकप्रद भर्न सकिनेछ । आस्वामा सहभागी बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट पनि सेयर भर्न पाउने व्यवस्था छ । ।